Nagu saabsan - Beijing Allwin Pack Co., Ltd.
Allwin Pack wuxuu ku yaalaa magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, taas oo ah shirkad baakad cunno oo dhammeystiran, kuna takhasustay weelka foornada aluminium, weelasha caaga ah, qaabeynta qaab dhismeedka caaryada iyo horumarinta, farsamada otomaatiga R&D, suuq geynta iyo adeegga macaamiisha oo ka mid ah shirkadda isku dhafan. Saldhigga wax soo saarka Allwin Pack wuxuu ku yaal Hebei, Tianjin, Shandong iyo Guangdong, waxaan haynaa 30, 000 oo mitir murabac oo aqoon isweydaarsi ah oo aan boodh lahayn, oo leh qalab otomaatig ah oo si otomaatig ah u shaqeynaya iyo dib-u-warshadaynta qashinka si otomaatig ah. kormeerka alaabta ceyriinka iyo shaybaarka baaritaanka waxqabadka, shaybaarka naqshadeynta caaryada, waxaan soo saarnay oo aan tijaabinay ku dhowaad kun kun oo wasakhahaasi kaabaya ganaax sidii hogaamiye warshadani.
Allwin Pack waxay isticmaashaa alaabta ceyriinka ah oo dhamaantood la jaan qaadaya heerarka caalamiga ah ee deegaanka, dhammaantood waa heerka cuntada. Waxaan dhisnay waqti dheer
iskaashi lala yeesho macaamiisha Waqooyiga Ameerika, Yurub, Japan, Austuralia, Aasiya iyo sidoo kale shirkadaha diyaaradaha, dukaamada waaweyn, adeegga cuntada iyo soo saarayaasha cuntada.
Allwin Pack waxay heshiisyo muddo dheer ah oo sahay ah la saxiixatay dhowr dukaanno waawayn oo waaweyn oo ku yaal Maraykanka, si loogu siiyo muraayadaha cabbirka buuxa / badhkooda iwm, alaabada Allwin Pack ayaa ku guulaystay in laga aqoonsado suuqa Waqooyiga Ameerika tayada ugu sarraysa awgeed, Allwin Pack ayaa leh waxaa lagu ammaanay inay yihiin alaab-qeybiye tayo leh.
Waxyaabaha ay soo bandhigtay Allwin Pack waxaa ka mid ah weelasha aluminium aluminium, weel caag ah, daboolka balaastigga ah, duubabka wax lagu duubo ee guryaha ku jira, Xaashida bireed ee isku-laaban, taarikada lagu dubo, kuleylka kuleylka iyo ka qaadida weelka iwm, isku dar in ka badan 700 oo shey.
Allwin Pack waxay si adag u xakameysaa tayada wax soo saarka waxayna la socotaa dhamaan habka wax soo saarka iyadoo loo eegayo tikniyoolajiyad casri ah iyo adeegyo tayo leh, iyadoo la adeegsanayo bey'ada u fiican, fikradda caafimaadka iyo badbaadada, waxaan higsaneynaa inaan abuurnno shirkad baakad weel ganacsi oo aad u fiican leh oo leh alaab tayo wanaagsan leh iyo gaarsiin dhakhso leh.